Paris Saint-Germain's German headcoach Thomas Tuchel (L) talks to Paris Saint-Germain's Uruguayan forward Edinson Cavani during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and FC Girondins de Bordeaux at the Parc des Princes Stadium, in Paris, on February 9, 2019. - Edinson Cavani is likely to miss the first leg of Paris Saint-Germain's Champions League encounter with Manchester United, coach Thomas Tuchel told French television on February 10, 2019. (Photo by ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)
စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးဖို့နီးကပျလာတာနဲ့အမြှ အနာဂတျမတညျငွိမျတဲ့သတငျးတှထှေကျနပေမေယျ့ တိုကျစဈမှူးကာဗာနီဟာ သူ့ရဲ့အနာဂတျအစီအစဉျမှာ ပွီးပွညျ့စုံစှာပါဝငျနသေူတဈယောကျလို့ ပီအကျဈဂြီနညျးပွသောမတျဈတူခယျြက အခိုငျအမာပွောကွားလိုကျပါတယျ။ဥရုဂှေးတိုကျစဈမှူးရဲ့ ပီအကျဈဂြီနဲ့လကျရှိစာခြုပျသကျတမျးက ဒီရာသီအပွီးမှာကုနျဆုံးမှာဖွဈပွီး စီးရီးအထေိပျသီးဂြူဗငျတပျကိုပွောငျးရှလေိ့မျ့မယျလို့ သတငျးတှကေယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ထှကျပျေါနပေါတယျ။
အသကျ ၃၂နှဈရှိနပွေီဖွဈတဲ့ ကာဗာနီဟာ ၂၀၁၃ခုနှဈမှာ ပွငျသဈကလပျကိုစတငျရောကျရှိခဲ့တာဖွဈပွီး အသငျးရဲ့ထာဝရဂိုးအမြားဆုံးသှငျးသူဖွဈနပေါပွီ။လကျရှိအခြိနျမှာ တငျပါးဒဏျရာကွောငျ့ နိုကျဈနဲ့ကစားရမယျ့ သောကွာနေ့ လီဂူး-၁ပှဲအတှကျမသခြောတဲ့တိုငျ သူ့ကိုအပွီးသတျဆုံးရှုံးရမှာဟာ ပွငျးထနျတဲ့ခံစားမှုတှကေိုပျေါပေါကျစလေိမျ့မယျလို့ တူခယျြကယုံကွညျထားပါတယျ။
“ စာခြုပျသဈခြုပျဖို့ သူ သဘောတူမယျလို့ယုံကွညျထားသလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးမြိုးအတှကျ ဖွဖေို့စောပါသေးတယျ။အသငျးနဲ့သူ စကားပွောနတေယျဆိုတာတော့ ကြှနျတျော အသအေခြာပွောနိုငျပါတယျ။ဒါဟာ သူ့ကလပျဆိုတာ သူလညျးသိပါတယျ။သူ့စိတျထဲက အကွောငျးအရာအတိအကကြိုတော့ ကြှနျတျောလညျး ဘယျသိနိုငျမလဲဗြာ။ဒဏျရာကွောငျ့ သူ့ကိုသီတငျးပတျအခြို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပမေယျ့ ကွံ့ခိုငျမှုပွနျလညျပွညျ့ဝဖို့၊ ကှငျးထဲပွနျရောကျအောငျလုပျဖို့က ကြှနျတေျာ့ရဲ့အဓိကတာဝနျပါပဲ။
သူဟာ အသငျးအတှကျ ဂိုးအမြားဆုံးသှငျးပေးထားတယျ။သိပျကိုအရေးပါတဲ့ ကစားသမားတဈယောကျဖွဈနတေယျ။ကြှနျတျောအမွဲတမျး စိတျဝငျတစားတိုငျပငျရတဲ့ ကစားသမား ၅ဦးထဲက တဈဦးဖွဈနတေယျ။တကယျတော့ ကာဗာနီဟာ ကှငျးတှငျးရောကှငျးပွငျမှာပါ အတေျာ့ကိုအရေးပါတဲ့သူပါ ” လို့ တူခယျြကဖှငျ့ဟသှားပါတယျ။
စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးဖို့နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှ အနာဂတ်မတည်ငြိမ်တဲ့သတင်းတွေထွက်နေပေမယ့် တိုက်စစ်မှူးကာဗာနီဟာ သူ့ရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်မှာ ပြီးပြည့်စုံစွာပါဝင်နေသူတစ်ယောက်လို့ ပီအက်စ်ဂျီနည်းပြသောမတ်စ်တူချယ်က အခိုင်အမာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှူးရဲ့ ပီအက်စ်ဂျီနဲ့လက်ရှိစာချုပ်သက်တမ်းက ဒီရာသီအပြီးမှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီး စီးရီးအေထိပ်သီးဂျူဗင်တပ်ကိုပြောင်းရွှေ့လိမ့်မယ်လို့ သတင်းတွေကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အသက် ၃၂နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ကာဗာနီဟာ ၂၀၁၃ခုနှစ်မှာ ပြင်သစ်ကလပ်ကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အသင်းရဲ့ထာဝရဂိုးအများဆုံးသွင်းသူဖြစ်နေပါပြီ။လက်ရှိအချိန်မှာ တင်ပါးဒဏ်ရာကြောင့် နိုက်စ်နဲ့ကစားရမယ့် သောကြာနေ့ လီဂူး-၁ပွဲအတွက်မသေချာတဲ့တိုင် သူ့ကိုအပြီးသတ်ဆုံးရှုံးရမှာဟာ ပြင်းထန်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုပေါ်ပေါက်စေလိမ့်မယ်လို့ တူချယ်ကယုံကြည်ထားပါတယ်။“ စာချုပ်သစ်ချုပ်ဖို့ သူ သဘောတူမယ်လို့ယုံကြည်ထားသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးအတွက် ဖြေဖို့စောပါသေးတယ်။အသင်းနဲ့သူ စကားပြောနေတယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော် အသေအချာပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာ သူ့ကလပ်ဆိုတာ သူလည်းသိပါတယ်။သူ့စိတ်ထဲက အကြောင်းအရာအတိအကျကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်သိနိုင်မလဲဗျာ။ဒဏ်ရာကြောင့် သူ့ကိုသီတင်းပတ်အချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့် ကြံ့ခိုင်မှုပြန်လည်ပြည့်ဝဖို့၊ ကွင်းထဲပြန်ရောက်အောင်လုပ်ဖို့က ကျွန်တော့်ရဲ့အဓိကတာဝန်ပါပဲ။သူဟာ အသင်းအတွက် ဂိုးအများဆုံးသွင်းပေးထားတယ်။သိပ်ကိုအရေးပါတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်အမြဲတမ်း စိတ်ဝင်တစားတိုင်ပင်ရတဲ့ ကစားသမား ၅ဦးထဲက တစ်ဦးဖြစ်နေတယ်။တကယ်တော့ ကာဗာနီဟာ ကွင်းတွင်းရောကွင်းပြင်မှာပါ အတော့်ကိုအရေးပါတဲ့သူပါ ” လို့ တူချယ်ကဖွင့်ဟသွားပါတယ်။